တရုတ် Pyrogallol ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူ |Sanjiang
ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ဓာတုကုန်ကြမ်းပစ္စည်း အများအပြားကို အသုံးပြုထားသည်။Scheele (1786) က ဂါလစ်အက်ဆစ်ကို အပူပေးသည့်ပုံစံဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။လက်ရှိတွင် Gallic acid ကို tannin မှ ရရှိသည်။အပူပေးခြင်းသည် decarboxylation ကိုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းကို ဆေးဝါးပေါင်းစပ်မှု၊ ဆိုးဆေးများ၊ အစားအစာများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများနှင့် ဓာတုကုန်ကြမ်းပစ္စည်း အများအပြားကို အသုံးပြုထားသည်။Scheele (1786) က ဂါလစ်အက်ဆစ်ကို အပူပေးသည့်ပုံစံဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။လက်ရှိတွင် Gallic acid ကို tannin မှ ရရှိသည်။အပူပေးခြင်းသည် decarboxylation ကိုဖြစ်စေသည်။.ဆေးဝါးပေါင်းစပ်မှု၊ ဆိုးဆေးများ၊ အစားအစာများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
အခြားအမည်များ1,2,3-Trihydroxybenzene၊ Pyrogallic အက်ဆစ်
အိမ်ခြံမြေ-ဤထုတ်ကုန်သည် အဖြူရောင် တောက်ပြောင်သော ပုံဆောင်ခဲမှုန့်ဖြစ်ပြီး ရေ2ပိုင်း၊ အီသနော၏ 1 အစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ်2ပိုင်း ether တွင် ပျော်ဝင်နိုင်သည်။
Inအမျိုးသားစက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်း LY-T 2862 နှင့်အညီ၊US "ဓာတုဓာတ်ခွဲဆေးစံနှုန်းများ" နှင့်အညီ;Lawson V ဗားရှင်းနှင့် ဂျပန်အမျိုးသားအဆင့် စံ K8780 ဓါတ်ကူပစ္စည်း သတ်မှတ်ချက်များ။
အရည်ပျော်မှတ်သည် 131 ဖြစ်သည်။~134 ℃၊ ဆူမှတ်သည် 309 ℃၊ ဆွေမျိုးသိပ်သည်းဆမှာ 1.46 ဖြစ်သည်။UVλအများဆုံး2. ရေတွင် pH = 5.4 ရှိသောအခါ 88nm။ရေ၊ အရက်၊ အီသာတွင် ပျော်ဝင်သည်၊ benzene၊ chloroform နှင့် carbon disulfide တွင် အနည်းငယ်ပျော်ဝင်ပါသည်။
အစိုဓာတ်နှင့် အလင်းရောင်ကို ရှောင်ကြဉ်ပါ၊ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် အလုံပိတ်၊ သတ္တုနှင့် မထိတွေ့ပါနှင့်။
ထုတ်ကုန်ကို တစ်စည်လျှင် အသားတင်အလေးချိန် 25 ကီလိုဂရမ်ဖြင့် ကတ်ထူဒရမ်များဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသည်။
2. ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းတွင် အရေးကြီးသော ဓာတ်ကူပစ္စည်းနှင့် ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ
3. ဆေးဝါးတွင် ပြင်းထန်သော လျှော့ချအေးဂျင့်နှင့် မှိုသတ်ဆေး
4. အစာကျွေးခြင်း၏ အရေးကြီးသော ဖော်မြူလာများထဲမှ တစ်ခု
5. အလွန်ထိရောက်ပြီး အကြွင်းအကျန်နည်းသော ပိုးသတ်ဆေး
Gallic acid စမ်းသပ်မှု
ယက်လုပ်အိတ် 25 ကီလိုဂရမ် / အိတ်
နောက်တစ်ခု: Propyl Gallate (ဆေးဝါးအဆင့်)